Mega ကြိတ်စက် Shutter China Manufacturers & Suppliers & Factory
Mega ကြိတ်စက် Shutter - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Mega ကြိတ်စက် Shutter ထုတ်ကုန်များ)
သင့်ရဲ့တံခါးကိုအရွယ်အစား6*6မီတာထက်မကျော်လွန်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုချင်ပါတယ်။ အကယ်. ကျိကျိတက်မြန်နှုန်းမြင့်တံခါးကိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူ ကျေးဇူးပြု. တံခါးကို stacking မြန်နှုန်းမြင့်: အထူးမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကိုလှိမ့တံခါးများအတွက်အသုံးပြုမော်တော်: သုံးအဆင့် 380V; နှင့်တစ်ခုတည်းအဆင့် 220 V...
မြန်မြန်မြန် roller shutter
PVC မြန်နှုန်းမြင့်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော roller shutter
မြန်နှုန်းမြင့်မားသော တံခါးတိုင်ပုံ မြန်နှုန်းမြင့်သော PVC stacking တံခါး (လှိမ့်သောတံခါးကို stacking၊ PVC stack slide တံခါး၊ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် stacking တံခါး) သည်သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်သောတီထွင်မှုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။...
မြန်နှုန်းမြင့် PVC မြန်သော stacking roller shutter
CE LVD မြန်နှုန်းမြင့် PVC stacking roller shutter
မြန်နှုန်းမြင့်မားသော တံခါးတိုင်ပုံ နေရာများစွာတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုထားသောမြန်နှုန်းမြင့် PVC stacking တံခါး (လှိမ့်သောတံခါး၊ PVC ဆလိုက်တံခါး၊ အပြိုင်ပြောင်းနိုင်သောတံခါး) ကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လျင်မြန်သောတံခါးများမှအကျိုးကျေးဇူးရသော်လည်းယင်း၏တည်ရှိမှုကိုသတိမထားမိဘဲ၊ ။...
ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုထားသော Auto Zipper Fast Roller Shutter
စက်ရုံအသုံးပြုမှု PVC မြန်နှုန်းမြင့်ကြိတ်စက်
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ဤစက်မှုတံခါးများ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်မှာတိုက်မိပြီးနောက်မိမိကိုယ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ အထူးကြပ်မတ်အသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသောဤမြန်နှုန်းမြင့် pvc တံခါးများသည်သင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာများ:...
အလိုအလျောက်မိမိကိုယ်မိမိပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းမြန်နှုန်းမြင့် Roller Shutter
အထည်အလိပ်ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း Rapid Shutter Door
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သင်၏စက်ရုံ၊ စက်ရုံများ၊ စူပါမားကတ်များသို့ PVC Zipper Door (ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ခြင်းတံခါး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတံခါး၊ အလိုအလျောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတံခါး) အချို့ကိုသင်ရှာဖွေနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဇစ် roller ရှပ်တာသည်သင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။...
Zipper Quick Fabric Roller Shutter ဂိတ်
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် PVC Zipper Door (Self repair door, Self recovery တံခါး၊ Auto recovery တံခါး) သည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။ သင်၏ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းများတွင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသလား။...
PVC Auto Zipper မြန်နှုန်းမြင့် Roller Shutter
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် PVC Zipper Door (Self repair door, Self recovery တံခါး၊ Auto recovery တံခါး) သည်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာစက်မှုလုပ်ငန်း၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်ရှိအီလက်ထရွန်နစ်များတွင်အသုံးပြုသောတံခါးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။...
အလိုအလျောက်မြန်မြန် Roller Shutter ကိုပြုပြင်ပါ
Self-Repair မြန်နှုန်း တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် PVC Zipper Door (ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြုပြင်သောတံခါး၊ ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတံခါး၊ အလိုအလျောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတံခါး) သင်၏အလုပ်တွင်အရေးကြီးသောအကူအညီတစ်ခုအဖြစ်အလုပ်လုပ်သည်။ open / close speed သည် ၀.၆ ~ ၁.၅ မီတာ / s ထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ လျှောက်လွှာများ:...
စက်ရုံ Rapid Roller Shutter သတ္တုတံခါး
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် လူမီနီယမ်မာကျောသောမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးသည်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အလိုအလျောက်ရှိသောတံခါးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းစံချိန်၌ဤပုံစံသည်ထိပ်ဆုံးအရောင်းတွင်အမြဲရှိသည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်မြန်သောတံခါးဟုခေါ်သည်။ တံခါးကို ၁ မီတာ / ကျော်ကျော်ဖွင့်နိုင်သည်။...
2019 နယူး Spiral လူမီနီယမ်အလွိုင်း Rapid Roller Shutter
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် တာဘိုင် Hard မြန်နှုန်းမြင့်သောလှိမ့်တံခါးသည်သင်၏စီးပွားရေးအတွက်လုံးဝအထောက်အကူဖြစ်သည်။ သင်၏ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ ဆက်သွယ်ခြင်းတွင်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်သင်လိုအပ်ပါသလား။...
စက်ရုံစျေးတာဘိုင်အလျင်အမြန် Roller Shutter တံခါး
ဂရိတ်စွမ်းဆောင်ရည် Spiral Rapid Shutter တံခါး
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဆိုသည်မှာပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဆိုလိုသည်။ တာဘိုင် roller ရှပ်တာမြန်သောတံခါးသည်သာမန်တံခါးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အလွန်ကောင်းသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်သင်လျင်မြန်စွာတံခါးဖွင့်ထားရန်လိုအပ်သနည်း။...
မြင့်မားသော Spiral Rapid Shutter တံခါး
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သင်၏စက်ရုံ၊ စက်ရုံများ၊ စူပါမားကတ်များသို့ခဲယဉ်းသောအလူမီနီယံမြန်နှုန်းမြင့်တံခါးအချို့ကိုသင်ရှာနေပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏တာဘိုင် roller ရှပ်တာသည်သင်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာများ: လေတိုက်နှုန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်၊...
ဂိုဒေါင် Spiral မြန်နှုန်းမြင့် Shutter တံခါး
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် မျက်မှောက်ခေတ်ဘဝ၌လူတိုင်းလျင်မြန်စွာရပ်တည်နေကြသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးသည်စောင့်ဆိုင်း။ မရပ်နိုင်။ လူအုပ်ကြီး၌သင်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တံခါးဝင်ရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ တံခါးသည်သေး။ ဖြည်းဖြည်းချင်းဖွင့်သည်။...
Hard Metal Fast Roller Shutter တံခါး
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် သင်မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါစေသင်သွားရန်ကြံစည်လေလေ Aluminum အမြန်နှုန်းတံခါးသည်သင့်အနားတွင်အမြဲရှိနေပြီး၎င်းကိုသင်လုံးဝမတွေ့ပါ။ သို့သော်တာဘိုင်အမြန်နှုန်းရှိသော roller shutter တံခါးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays...
က ISO 9001 တာဘိုင်သတ္တုလျင်မြန်စွာကြိတ်စက်
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်မှော်တံခါးကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသည်။ တာဘိုင်အမြန်နှုန်းမြန်အမြန်တံခါး၊ သတ္တုအမြန်တံခါးသည်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုရုံသာမကသင်၏အမြတ်အစွန်းကိုရရှိရန်ကူညီပေးသည်။ လျှောက်လွှာများ: လေတိုက်နှုန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်၊...
Garage လူမီနီယမ်မြန်နှုန်းမြင့် Roller Shutter Door
တာဘိုင်လူမီနီယမ်အစာရှောင်ခြင်း Roller Shurtter တံခါးခြုံငုံသုံးသပ်ချက် တာဘိုင်မြန်နှုန်းမြင့်သောတံခါး လျှောက်လွှာများ: လေတိုက်နှုန်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အပြင်၊ အပူချိန်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဆေးဝါး၊ သိုလှောင်ရုံ၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်ခြင်း။ *...
စက်ရုံစျေး Spiral Fast Hard Roller Shutter
Mega ကြိတ်စက် Shutter mega ကြိတ်စက် Shutter PVC ကြိတ်စက် Shutter overhead ကြိတ်စက် Shutter quick ကြိတ်စက် Shutter Rapid PVC ကြိတ်စက် Shutter PVC Indutrial ကြိတ်စက် Shutter လိမ်ကြိတ်စက် Shutter